Vaovao - Ahoana ny fiantraikan'ny halavan'ny fifantohana amin'ny valin'ny modeling 3D
Vaovao momba ny orinasa Rainpoo tech
Ny fiantraikan'ny halavan'ny fifantohana amin'ny valin'ny modeling 3D
Ho an'ny fakana sary miavaka, misy seho efatra izay tena sarotra ny manangana maodely 3D:
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php/
Zavatra mihetsika miadana. Ohatra, fiara eny amin'ny sampanan-dalana
Ny seho tsy azo ampifanarahana ireo teboka asongadinana na ireo teboka fampisehoana mifanentana dia misy lesoka lehibe, toy ny hazo sy kirihitra.
Trano misy banga. Tahaka ny fiambenana, toby fijanonana, tilikambo, tariby, sns.
Ho an'ny seho karazana 1 sy 2, tsy maninona ny fanatsarana ny kalitaon'ny angona tany am-boalohany, ny maodely 3D dia tsy hihatsara ihany.
Ho an'ny seho karazana 3 sy karazana 4, amin'ny tena fandehan-javatra, azonao atao ny manatsara ny kalitaon'ny maodely 3D amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny famahana, saingy mbola tena mora foana ny manana banga sy lavaka ao amin'ilay maodely, ary ho ambany dia ambany ny fahombiazan'ny asany.
Ho fanampin'ireo sehatra manokana voalaza etsy ambony, amin'ny fizotran'ny maodely 3D, ny zavatra dinihintsika bebe kokoa dia ny kalitaon'ny maodely 3D an'ireo trano. Noho ny olana mifandraika amin'ny masontsivana momba ny sidina, ny fepetra maivana, ny fitaovana azo angona angona, ny rindrambaiko modely 3D, sns., Dia mora ihany koa ny mampiseho ilay trano: matoatoa, sary, fanalefahana, famafana, fanovana, fametahana sns. .
Mazava ho azy, ireo olana voalaza etsy ambony ireo dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny fanovana modely 3D. Na izany aza, raha te-hanatanteraka asa fanovana maodely marobe ianao dia ho goavana tokoa ny vidin'ny vola sy ny fotoana.
Modely 3D alohan'ny fanovana
Modely 3D aorian'ny fanovana
Amin'ny maha mpanamboatra R & D fakan-tsary mihetsika azy, Rainpoo dia mieritreritra amin'ny fomba fijerin'ny fanangonana data:
Ahoana ny fomba hamoronana fakantsary mikatso mba hanatsarana tsara ny kalitaon'ny maodely 3D nefa tsy hampitombo ny firongatry ny zotram-sidina na ny isan'ny sary?
2 、 Inona ny halavan'ny vava
Ny halaviran'ny masomaso dia masontsivana lehibe indrindra, mamaritra ny haben'ny foto-kevitra eo amin'ny sehatry ny sary, izay mitovy amin'ny refin'ny zavatra sy ny sary. Rehefa mampiasa fakan-tsary niomerika (DSC) dizitaly, ny sensor dia ny CCD sy CMOS. Rehefa ampiasaina amin'ny aerial -survey ny DSC, ny halaviran'ny fifantohana dia mamaritra ny halaviran'ny santionan'ny tany (GSD).
Rehefa mitifitra ilay zavatra kendrena mitovy amin'ny halavirana mitovy dia ampiasao ny solomaso misy halavany lava, lehibe ny sarin'io zavatra io, ary kely ny masom-by misy halava fohy.
Ny halavan'ny afovoany dia mamaritra ny haben'ny zavatra amin'ny sary, ny zoro fijerena, ny halalin'ny saha ary ny fomba fijerin'ny sary. Miankina amin'ny fampiharana, ny halavan'ny fotony dia mety ho samy hafa be, manomboka amin'ny mm vitsivitsy ka hatramin'ny metatra vitsivitsy. Amin'ny ankapobeny, ho an'ny sary an'habakabaka dia misafidy isika, misafidy ny halavan'ny fotony ao anatin'ny 20mm ~ 100mm.
3 、 Inona no atao hoe FOV
Ao amin'ny solomaso optika, ny zoro noforonin'ny teboka afovoan'ny solomaso ho toy ny tendrony sy ny elanelana ambony indrindra amin'ny sarin'ny zavatra afaka mandalo ny masolavitra dia antsoina hoe zoro fijery. Ny lehibe kokoa ny FOV, ny kely kokoa ny fanamafisana ny optique. Raha atao teny hoe, raha tsy ao anatin'ny FOV ilay zavatra kendrena dia tsy hiditra amin'ny solomaso ny hazavana taratra na navoakan'ny zavatra ary tsy hamboarina ny sary.
4, Halavan'ny fifantohana & FOV
Ho an'ny halavan'ny fakantsary miavaka dia misy tsy fifankahazoan-kevitra roa mahazatra:
1) Arakaraky ny halavan'ny halavan'ny vava dia avo kokoa ny haavon'ny sidina amin'ny sidina, ary ny lehibe kokoa amin'ny faritra azon'ilay sary atao;
2) Arakaraky ny halavan'ny halava mifantoka, ny haben'ny haben'ny fandrakofana sy ny fahombiazan'ny asa;
Ny antony mahatonga ny tsy fahazoan-kevitra roa etsy ambony dia ny tsy fankatoavana ny fifandraisana misy eo amin'ny halavan'ny focal sy ny FOV. Ny fifandraisana misy eo amin'izy roa dia: ny lava ny halavan'ny vava, ny kely kokoa ny FOV; ny fohy ny halava mifantoka, ny lehibe kokoa ny FOV.
Noho izany, rehefa mitovy ny haben'ny vatana, ny famahana ny endriny ary ny famahana ny angon-drakitra, ny fanovana ny halavan'ny vava dia hanova ny haavon'ny sidina fotsiny, ary ny faritra rakotry ny sary dia tsy miova.
5, Halavan'ny fifantohana sy fahombiazan'ny asa
Rehefa avy fantatrao ny fifandraisana misy eo amin'ny halavan'ny vava sy ny FOV dia mety hieritreritra ianao fa ny halavan'ny halavan'ny vava dia tsy misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny sidina. Ho an'ny Ortho-photogrammetry, dia marina izany (raha ny marina, arakaraka ny lava ny halavan'ny vava, ny avo kokoa ny haavon'ny sidina, arakaraka ny angovo laniny, ny fohy kokoa ny ora sidina ary ny ambany mahomby miasa).
Ho an'ny sary mivalana oblique, arakaraky ny halavan'ny halaviran'ny fifantohana no hampihena ny fahombiazan'ny asa.
Amin'ny ankapobeny dia apetraka amin'ny zoro 45 ° ny mason-tsary mitongilana amin'ny fakantsary, mba hahazoana antoka fa angonina ny angon-drakitra an-tsisin'ny faritry ny faritra kendrena, mila manitatra ny zotra-sidina.
Satria madiodio amin'ny 45 ° ny solomaso, hitsangana ny telozoro mahitsy isosola. Raha heverina fa ny fiheverana ny sidina fiaramanidina dia tsy raisina an-tsaina, ny axis optika lehibe an'ny masolavitra oblique dia entina hatrany amin'ny sisin'ny faritra fandrefesana ho toy ny fepetra takiana amin'ny lamin'ny zotra, avy eo ny zotra drone dia manitatra ny halavirana EQUAL amin'ny haavon'ny sidina. .
Ka raha tsy miova ny faritra fandrakofana ny zotra, ny tena faritra iasan'ny masom-potoana fohy halava fohy dia lehibe kokoa noho ilay solomaso lava.
Previous:Ny fiantraikan'ny teboka fanaraha-maso sy ny angona PPK amin'ny maha-marina ny maodely 3D
Manaraka:Ny fiantraikan'ny karazana drôna GSD sy ny fiaramanidina ny fahamarinan'ny maodely 3D